Omume na ọtụtụ mma agha na Onyunyo Knight: Mortal Adventure | Gam akporosis
Onyinye Knight: Mortal Adventure bụ mbanye anataghị ikike 'n slash nke ị na mma gị kpara dike
Onyinye Knight: Mortal Adventure bụ egwuregwu ọhụrụ maka gam akporo nke dị na Playlọ Ahịa Play izu ole na ole ugbu a na nke anyị ga-enwe ike ijikwa ndị dike atọ dị iche na egwuregwu ọ bụla. A dum mbanye anataghị ikike 'n egbukpọ nke ịfụ elu ndị niile na-iro nke hell onye ga-agbalị iji ndụ anyị.
Dị nnọọ egwuregwu mara amara na e ji ihe ndị ahụ "onyinyo" na-ekwe ka ụfọdụ ndị ọzọ uru mgbe na-ejere ndị niile ọgụ na ihuenyo nke anyị mobile. Ọ bụghị egwuregwu mbụ na-eji ọchịchịrị na ndò iji mesie ihe nkiri ahụ ike bụ ọgụ ahụ n'onwe ya. Gaa maka ya.
1 Zoputa uwa nke Harmonia site na ndi agha
2 Nweta nkwalite gị warrior na Shadow Knight: egbu njem
3 Ihe karịrị 100 rụzuru
Zoputa uwa nke Harmonia site na ndi agha
Onyinye Knight: Mortal Adventure ga-akpọrọ anyị iji rụọ ọrụ nke Knight nke Shadows na ọ ghaghị inye aka weghachite ihe nkịtị na ụwa nke Harmonia, nakwa na emikpuola ya kpamkpam na agha ndò. Site na akụkọ a, anyị na-aga ngwa ngwa gaa mbanye anataghị ikike, n'agbanyeghị agbanyeghị ụfọdụ ngwa RPG.
Karịsịa na mma na akpọghe osisi ahụ iji melite nkà ọgụ nke ndị dike atọ anyị nwere ike iji otu ma ọ bụ nke ọzọ n'oge niile. Egwuregwu dabara nke ọma na ọgụ na nke ahụ anaghị ahapụ nke abụọ maka izu ike mgbe zombies ahụ ma ọ bụ ndị na-agagharị agagharị si n'otu ala ga-abịara anyị.
Njikwa ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka egwuregwu egwuregwu ndị ọzọ, na anyị nwere akara nchịkwa n'akụkụ aka ekpe mgbe na n'akụkụ nke ọzọ nnukwu iche iche nke emereme rụọ ọrụ iji rụọ ọrụ bụ isi ọgụ na ike nke nkà. Eziokwu bụ na n'akụkụ a Onyinyo Knight: Mortal Adventure ezuru anyị ka anyị rụọ ọrụ ya, ebe ọ bụ na nkà dị ole na ole.
Nweta nkwalite gị warrior na Shadow Knight: egbu njem
Eziokwu ahụ anyị nwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ onye agha ọzọ Ọ ga - enye anyị ohere iji njirimara ya kachasị mma iji kpochapụ ndị iro dị iche iche. Karịsịa ndị isi ọrụ ikpeazụ na-egosi ọkwa ole na ole ha na igwe ọrụ ha nke anyị ga - achọpụta; ọ bụ ezie na eziokwu na ọkwa mbụ anyị agaghị enwe ọtụtụ nsogbu na ụdị ndị iro a nke nnukwu akụkụ na ndị ọzọ.
Ọ bụ na nka osisi ebe anyị ga-elebara anya na-aga imeziwanye nkà ma webata anwansi ndị ahụ na ọkpọ ahụ ga-eme ka anyị tufuo ọtụtụ ndị iro na otu egwu. Anyi na-ekwusi ike ugbu a na odi nkpa ime ka ndi agha anyi nwee oganihu.
N'ezie, igbe ndị ahụ a na-apụnaraghị onwe ha adịghịkwa efu; gịnị n'ụzọ taata UK na-achọ iweta ọkwa otu ahụ na "egwuregwu" ahụ nakwa na ọ gụnyere ụdị rụrụ arụ jikọtara ọtụtụ puku ndị na-eto eto. Igbe ndị a na-apụnara mmadụ ihe na-enyere anyị aka inweta ihe ndị anyị ga-eji emecha ndị dike atọ ahụ anyị nwere ike iji mee ihe n’oge ọ bụla.
Ihe karịrị 100 rụzuru
Onyinye Knight: Mortal Adventure dị na Spanish na nke a bụ ihe ngosi site na oge mbụ ka anyị wee ghara ịhapụ akụkọ ahụ ma anyị nwere ike ịghọta ngwa ngwa nke egwuregwu ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị na ha dị mgbagwoju anya. Egwuregwu nke anyị ji ahapụ ọgụ ahụ ọgụ, ọ bụ ezie na ọkwa dị mkpụmkpụ.
Anya bụ ebe ezigbo mkpesa gị dị na nhazi nke gburugburu na ihe odide. A na-arụkwa ọrụ nkà yana gburugburu iji mepụta ezigbo ahụmịhe egwuregwu. Ọ bụ na ihe isi ike ebe ikekwe ma ọ bụrụ na ọ chọrọ a obere ọrụ nke mere na anyị nwere mmetụta na ọ bụ obere ihe siri ike; ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ha ga-ewere ndụ anyị na mgbanwe mbụ.
Onyinye Knight: Mortal Adventure bụ egwuregwu ọhụrụ maka gam akporo nke dị na gam akporo ruo ọnwa ole na ole ugbu a ma na-enye anyị ohere ịnweta ahụmịhe ọgụ mara mma nke iji tinye ike ahụ niile. Have nwere ya n'efu na ume. Ma ị mara, ọ bụrụ na ị gwụchaa ...
Ngosipụta ihe ngosi dị mma na nke ahụ na-akpọrọ anyị ịlụ ọgụ na egwuregwu egwuregwu na ọtụtụ ndị iro.
Usoro edemede: 5,8
Anya ọ bụ mara mma nke ukwuu
Ọtụtụ ndị iro na ihuenyo
Ọtụtụ ihe odide na ikike
Obere nwayọ mgbe ụfọdụ
Shadow Knight: Ninja-Kampfer
Developer: Fansipan Nwere Oke
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Onyinye Knight: Mortal Adventure bụ mbanye anataghị ikike 'n slash nke ị na mma gị kpara dike
Nke a bụ Xiaomi Mi Band 5: onyonyo izizi, ọla aka ọhụrụ na nlekota oge
Oge mgbatị bụ ihe ọhụụ na ngwa dị mfe iji nwee ọdịdị oge